शालिन नेता अर्थमन्त्री – Todaypokhara
मन्त्री नियुक्त भएदेखि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सर्वाधिक चासोका व्यक्ति बनेका छन् । देशको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका नयाँ अर्थमन्त्री कार्कीको बारेमा उद्योगी, व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणको समेत चासो देखिएको छ । कुरा भन्दा कामलाई बढी प्राथमिकता दिने मन्त्री कार्की चर्चालाई खासै रुचाउँदैनन् । अलिकति काम गर्ने र हल्लिखल्ली धेरै गर्ने नेताहरुकाबिच नयाँ अर्थमन्त्री कार्की इमानदार तरिकाले काम गर्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन्् । त्यसैले पनि उनीप्रति धेरैको चासो जागेको हो ।
देशको ३१ औं अर्थमन्त्री बनेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको जन्म २०१२ सालमा साविकको भोजपुर जिल्ला देउराली गाविस, वडा नं. ४ र अहिलेको षडानन्द नगरपालिका, वडा नं ११ मा भएको हो । उनी काठमाडौंको हात्तीगौंडामा बस्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसभित्र ज्ञानेन्द्रबहादुर शालिन र भद्र नेताका रुपमा परिचित छन् । जे हो त्यो खुलस्त राख्नु र आर्थिक रुपमा इमान्दार तथा पारदर्शी हुनु उनका सबैभन्दा ठूला गुण हुन् । कुनै सस्तो टिप्पणी गरेर क्षणिक लोकप्रियता वा वाहवाही बटुल्न नचहाने अर्थमन्त्री कार्की यो कार्यकालमा सफल हुने धेरेको टिप्पणी छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भोजपुरबाट समानुपातिक सभासद कार्की इमानदार छविका रुपमा चिनिन्छन् । कुनै पनि विवादास्पद गतिविधिमा नमुछिएका कार्कीले पहिलो संघीय बजेटपछिको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका हुन् ।
लामो समयदेखि काङ्ग्रेस राजनीतिमा सक्रिय कार्की अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापछि नेपाल बिद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष भएका थिए । काँङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै उनी कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरीमकालीन प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत बनेका थिए । उनले राजनीतिक जीवनमा पटकपटक गरेर झण्डै ४ वर्ष जति जेल जीवन बिताएका छन् ।
राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर कार्की यसअघि २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत राज्यमन्त्री हुँदै मन्त्री बनेका थिए । जलस्रोत मन्त्री हुँदा यिनलाई माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) को लाइसेन्स बेच्न विदेशीहरुले ‘बौलाउने गरी पैसाको अफर’ गरेका थिए । तर यिनले ‘माथिल्लो तामाकोसी जसरी पनि नेपालीले बनाउनुपर्छ’ भन्ने अडान लिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतहरुसँग पनि अडान लिइरहे । कार्कीको अडानमा कांग्रेस नेता भीमबहादुर तामाङले पनि साथ दिएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘कन्भिन्सन्ड’ भएपछि विदेशीलाई दिने निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन ।
अहिले माथिल्लो तामाकोसी स्वदेशी लगानीमा निर्माणको करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बोलिे मात्रै राष्ट्रवादी भएका नेताहरु नेपालमा थुप्रै छन् तर कार्कीले बोलिमा भन्दा व्यवहारमा राष्ट्रियता देखाए ।
सरकार परिवर्तनैपिच्छे मन्त्री भइरहनेहरुको यहाँ हुल छ, तर जलस्रोतमा राम्रो काम गर्दा पनि यिनी ११ वर्षपछि मन्त्री भए । जलस्रोत मन्त्रीको कार्यकालमा यिनी कहिले पनि विवादमा आएनन् । यिनको शालिनता, उच्च नैतिकता र सबैसित मिलेर काम गर्ने बानीले अर्थ मन्त्रीका रुपमा पनि सफल हुन्छन् भन्ने धेरैको टिप्पणी छ ।
अर्थमन्त्रालयमा बुधवार पदबहाली गर्दै मन्त्री कार्कीले अत्यन्त मिहिनेतका साथ आर्थिक समृद्धिलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने र मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने गरी काम गर्ने बताइसकेका छन् ।